Quwadaha Adduunka iyo Iran oo Xal ka Gaaray Arintii Nuclear-ka Iran – Radio Daljir
Quwadaha Adduunka iyo Iran oo Xal ka Gaaray Arintii Nuclear-ka Iran
Luulyo 14, 2015 4:32 b 0
Talaado, Luuliyo 15, 2015 (Daljir) — Kulankii golaha wasiirada Israel ee ay maanta yeesheen, ayay ku cambaareeyeen heshiiska Nuclearka ee u dhexeeya Iran iyo dowladaha waaweyn ee loo yaqaan G5+1, kaasi oo la rajaynayo in la sixiixo maalmaha foodda inagu soo haya.
Wadadadalka ayaa hadda ka socda Viena, wuxuuna u dhexeeya lixda dal ee adduunka ugu awoodda badan marka lagu daro Jarmalka iyo Iran oo dhinac ah. Wadahadalada ayaa diiradda lagu saaray in ay Iran hakiso barnaamijkeeda Nuclearka muddo sannado ah, halka bedelkiisa laga qaadayo cunaqabataynta caalamiga ah ee saaran. Heshiiskan ayaa salka ku haya Iraan oo la aaminsanyahay inay ku howlantahay sidii ay u samasan lahayd hubka wax gumaada ee Nuclearka, halka ay iyaduna inkirsantahay arrintaa.
Waxay hubanti la’aani ka jirtaa xilliga heshiiska lagu dhawaaqayo, iyada oo diblumaasiyiini ay si hoose ugu gudbiyeen warbaahinta in heshiisku miiska saaranyahay lana sixiixayo Isniinta, taasi oo aan dhicin.
Israel dhinaceeda ayaa iyadu si adag uga soo horjeeda heshiis Nuclear oo Iran lala galo, iyada oo Ra’isal wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu muddo sannado badan ah uu ka dagaalamayay in heshiis caynkan ahi uu hirgalo.
Netanyahu ayaa Washington u safray bishii Maarso ee sannadkan, khudbadana u jeediyay labada dhinac ee Congreska isaga oo dhalleeceeyay heshiiska soo socda isla markaana ku adkeeyay in ay culays saaraan maamulka Madaxwayne Obama.
Maanta, mar uu la hadlayay Netanyahu ayuu sheegay in hadii aan isaga dadaalkiisu jiri lahayn, ay Iran mar hore awood u yeelan lahayd in ay samaysato Nuclear wax ka bur-burin kara masaafo uu dalkiisu kamid yahay.
‘‘Xitaa hadii waxoogaa horumar ah lasameeyay daqiiqadihii ugu dambeeyay, hashiiskani asal ahaanba sida aynu fahansannahay waa mid xun, in Iraan loo oggolaado inay noqoto dowlad leh Nuclear wax badan baa ku duugan” Netanyuhu ayaa yidhi isaga oo walaaciisa sii raaciyayna wuxuu yidhi ” waxay hubeeyaan Xisbullaah, waxay maal galiyaan Xamaas iyo Islamic Jihaad”
Sacuudiga ayaa dhinaciisa ku tilmaamay heshiiskan mid u horseedi doona Bariga dhexe in lagu tartamo horumarinta Nuclearka, isaga oo sheegay in ay Iraan kula xaaltami doonaan hadba sida ay tallaabada u qaado, taasi oo macnaheedu yahay hadii ay samaysato waanu samaysan.
Heshiiskan ayaa waxaa hadda ku qanacsan dalalka waawayn ee Maraykanka, Ruushka, Faransiiska, Ingiriiska, Shiinaha iyo Garmalka.
Baaritaanno ka socda Laamu ka dib Askar lagu laayay Halkaas